Wet/kpọrọ nkụ RFID Inlay
Ọnụ ego HF
Ọnụ ego UHF
Ihe mmado RFID
Aha mmado na-emegide adịgboroja RFID
RFID Uwe mkpado
Akwụkwọ mkpado RFID
Mkpado windo RFID
Mkpado pụrụ iche RFID
Ihe mgbochi mkpado RFID
Mkpado seramiiki RFID
RFID na -asa ákwà Tag
Mkpado akara RFID
Mkpado Taya RFID
Ihe ngosi RFID
RFID Ewepu biin Tag
Ihe mkpuchi RFID
Akpa mgbaaka Wristband
Ihe mkpuchi eriri silik
Njikwa anụmanụ RFID
Igwe nyocha Microchip/ Reader
RFID ntị Tag
Mgbanaka Ụkwụ Nduru
Kaadị igbochi RFID
Njikwa nnweta RFID
Mills akwụkwọ na -eji teknụzụ RFID kwalite mmepụta na njikwa ngwa ahịa
Maka ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ Brazil nke na -achọghị njirimara, imeziwanye ngwa ahịa ngwa ahịa yana ịhazi usoro mmepụta ngwa ngwa bụ ihe dị mkpa maka atụmatụ imepụta ha. Yabụ, ụlọ ọrụ tinye ego na sistemụ RFID nke iTag. Usoro a na -eji mkpado iTag na Acura ...
Na -ekwu maka Ngwa nke teknụzụ RFID na njikwa ihe ndị agha
Ụlọ nkwakọba ihe nke oge a, lọjistik na nkesa abụrụla ihe dị iche iche na -achọsi ike. Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa ịghọta nchekwa na njikwa ngwongwo, kamakwa ịka akara ụdị, ọnụọgụ na njiri mara ngwaahịa dị n'ụlọ nkwakọba ihe otu otu. Karịsịa na njikwa mili ...
Ụgbọ njem anwụrụ ọkụ intermodal na -eji ụtaba na -eji palid akwụkwọ mmịfe RFID
Tinye pallet na -amị amị na RFID chip na pallet osisi. Jiri mgbago mgbago mgbago pụrụ iche iji dochie pallet na-amịkọrọ ọnụ yana pallet sịga niile etinyere na ya. Mgbe ị nyochachara ozi mgbawa site na nyocha na -apụ apụ, buru ya n'ime ụgbọ ala. Emechara mpempe akwụkwọ ahụ ...
Ndị ụgbọ elu China Eastern ga -ebupute teknụzụ RFID na Shanghai
Site na mbido njem njem ọkọchị na July, China Eastern ụgbọ elu ga-emejuputa teknụzụ RFID ibu na ntọala ya, Shanghai Hongqiao na Pudong ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, iji meziwanye nnyefe ziri ezi na ajụjụ oge nke ihe ndị njem nyochara, na ensu. ..
Ezi RFID nwere ike "nyere aka" ụlọ ọrụ, kama "bibie"
N'oge a iri nri na ịzụ ahịa n'ịntanetị abụrụla akụkụ nke ndụ anyị kwa ụbọchị, mana ọ nwere onye tụlere etu teknụzụ si tinye aka n'ịkwalite ihe omume ndị a? Ị chetụla echiche banyere mbufe ihe sitere na onye na -emepụta ihe n'ụlọ nkwakọba ihe nke onye nkesa n'oge nri ikpeazụ? Mgbe ole...
A ga -ewebata usoro njikwa akara ịchọ mma. Kedu uru nke itinye akwụkwọ mmado elektrọnik?
Na nso nso a (Septemba 21), Ọchịchị nchịkwa steeti nyere akwụkwọ ozi na ịrịọ arịrịọ n'ihu ọha na “Usoro Nlekọta maka Ngosipụta ịchọ mma (Draft for Solicitation of Comments)” (nke a na -akpọzi '' Draft for Comments ')) ịrịọ arịrịọ site na. ..
Kedu ihe kpatara ịzụlite ụkpụrụ ụlọ ọrụ maka njirimara nlekọta akwa (RFID)?
Kedu ihe kpatara ịzụlite ụkpụrụ ụlọ ọrụ maka njirimara akwa? Kemgbe 2017, Associationlọ nhicha akwa nke German abụrụla onye mmekọ nke 4.0 Digital Process Competence Center maka SMEs. N'ọnọdụ a, Digital TV na 2018 kpebiri ime ogbako maka digitalization nke teknụzụ na gburugburu ...
Ndị otu ụlọ ọrụ Shanghai na -eji teknụzụ RFID na -eme mbọ ọhụrụ iji gbanwee azụmahịa mba ofesi
Dọwa mgbawa na akwa nhicha ahụ wee jiri akara ejiri aka RFID were ya gụọ ya. Site na ịwụnye ihe mmetụta na sweta owu, ECG nwere ike iziga dọkịta site na igwe ojii, nke dabara maka nleba anya na ndụmọdụ. Mgbakwunye nke akwa akwa na akwa ...
Teknụzụ RFID na -enyere ndị ọkà mmụta sayensị aka ịmụ ntule
Nkọwapụta bụ isi okwu na ngalaba ọmụmụ bayoloji, na ụzọ dị mkpa maka ntuzi aka bụ ngwakọ ngwakọ. Mgbe Dr. Tobias Marczewski na onye na -eme nchọpụta Ma Yongpeng nọ na -amụ nhazi ụdị na mkpụrụ ndụ ihe nketa na mpaghara ngwakọ eke nke Lantana camara na Rho ...
China Southern ụgbọ elu na -eji akara akpa RFID n'ụzọ zuru oke na ụgbọ elu ọpụpụ ya na Guangzhou
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ mkpado elektrọn n'otu oge n'otu oge Aghọtara na ụkpụrụ akara mkpado RFID bụ iji teknụzụ njirimara ugboro ugboro RFID. Akụkụ kasịnụ bụ ịchọpụta ebumnuche na -akpaghị aka ma gụọ ma dee data metụtara ya site na mgbama redio, wi ...
Mmalite nke sistemụ traceability teknụzụ RFID ọhụrụ na -eweta ohere ọhụrụ maka yinye oyi
Ụkpụrụ ndụ ndị mmadụ akawanyela mma na ihe ọhụrụ ewepụtara aghọwo ngwaahịa a na-achọsi ike. Tinyere mkpali nke ọrịa na -efe efe, ọnụego mkpughe nke mkpụrụ ọhụrụ abawanyela na ịdabere na ndị ọrụ na mkpụrụ ọhụrụ. Na mgbakwunye, dị ka ọha dị d ...
Teknụzụ RFID na -enyere lọjistik ụtaba aka
Dịka teknụzụ na -arụ ọrụ nke ọma, ngwa ngwa na adaba adaba, teknụzụ RFID nwere ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ dị iche iche. Ụlọ ọrụ na -emepụta sịga webatara teknụzụ RFID n'ime sistemụ lọjistik ụlọ ọrụ ụtaba, ọkachasị iji melite arụmọrụ nke tobac ha ...
Ụlọ 1401, ZhuJiang International Center, LongXiang Avenue, LongGang District, Shenzhen, China 518172.